दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारका निरीह कदम
वीपी कोइरालापछिको दुईतिहाईसहितको शक्तिशाली मानिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार दिनप्रतिदिन कमजोर, अलोकप्रिय र निरीह बन्दै गएको छ । संख्यात्मकरुपमा सर्वशक्तिमान जस्तो लागे पनि त्यसले नैतिक बल गुमाइसकेको छ । यो सरकारले ‘मोटो’को जस्तो भ्रम छरे पनि ‘सुन्निएर फुलेको’ आभास हुन थालेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै अलोकप्रियताको चुली स्पर्श गर्न थालेको यो सरकारको यस्तै ताल र चालढाल कायमै रह्यो भने पाँच वर्ष पुग्दासम्म ‘जुन दिन खायौ खिरैखिर, गैगे उतैतिर’ भन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । सरकार सञ्चालनको यही ‘नमूना शैली’ कायमै रह्यो भने ‘कम्युनिष्ट हुँ’ भन्न लज्जाबोध गर्नुपर्ने र एकीकृत भएका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीसहित सिङ्गै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन नै सखाप हुने खतरा देखिएको छ ।
दम्भ र अहङ्कारले ग्रसित शक्तिशाली सरकारको ‘अशक्त’ कदमले पछिल्लोपटक ऊ आफै थलिएको छ । भर्खरै ‘गुठी विधेयक’मा सरकारले मञ्चन गरेको ‘नौटङ्की’ले पनि सरकार कमजोर र निरीह बन्दै गएको कुरातर्फ नै संकेत गर्छ र ऊ आफै ‘अशक्त’ बनेको प्रमाणित हुन्छ ।
यसका लागि भर्खरैका केही दृश्यहरु सम्झौं–
सतहमा गुठीसम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक भयो । त्यसपछि नेपाली राजनीति पूरै तरङ्गित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नु उसको धर्म नै भइहाल्यो । गुठी विधेयकका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी स्वर दिने, लय भर्ने र नृत्य गर्ने कुरा स्वभाविकै भयो । उसको जुन भूमिका अपेक्षित थियो, त्यही गर्यो । दाउरा खोज्यो, तेल छर्कियो, आगो बाल्ने कोसिस गर्यो । कांग्रेसको भूमिकाप्रति केही भन्ने ठाउँ छैन ।
यता सत्ताधारी दलमा चाहिँ एकप्रकारको जात्रा र तमासा नै देखियो भन्दा अनुपयुक्त नहोला । मध्यरातमा एउटा समूहभित्र पसेर कसैले एउटा व्यक्तिको गालामा बेसचड्काएर भागेपछि उक्त समूहभित्रै एकापसमा जसरी भद्रगोल तरिकाले कुटाकुट चल्छ, त्यही स्थिति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखियो । कार्यकर्ताहरुबाट सरकारको बचाउमा ‘अरिङ्गाल’को भूमिका अपेक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ता त परै जाऊन् नेता र स्वयम् सांसदहरु उल्टै सरकारतिरै खनिए । १० जना सत्तारुढ दलका सांसदहरुका प्रतिक्रिया, बोली र भाषणहरु १० वटा पार्टीका नेताका जस्ता सुनिए । एउटै पार्टीको एउटा सांसद उत्तरतर्फ कुदेको छ, अर्को सांसद दक्षिणतर्फ । एउटा नेता पूर्वतर्फ कुदेको छ, अर्को पश्चिमतर्फ । यता कार्यकर्ता पंक्ति चाहिँ ‘चूपचाप चार आना, बोले बाह्र आना’ । आखिर यस्तो भद्रगोल, लथालिङ्ग र गञ्जागोल किन ?
यहाँनेर यी प्रश्नहरु एकपछि अर्को गर्दै उब्जिएका छन्,
१. हिजो केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला केपी शर्मा ओलीले गलतै भने पनि त्यसको बचाउमा मैदानमा उत्रिने जनता अहिले किन सही भने पनि गलत बुझ्न थाले ?
२. हिजो पार्टी र नेतृत्वको बचाउमा ‘अरिङ्गाल’मात्रै बन्ने होइन गोली नै थाप्ने, ज्यानको बाजी थाप्ने कार्यकर्ताहरु किन साक्षी किनाराको बनेर रमिते बन्न विवश भए ?
३. झलनाथ खनाल जस्ता वरिष्ठ नेताहरु किन आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक सञ्चारमाध्यमबाट वा जनस्तरबाट थाहा पाउँछन् ?
४. आफ्नै सरकारका मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिएको भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँछन् ?
५. एउटै पार्टीका सांसदहरु, नेताहरु एउटै विषयमा बोल्दा पनि किन ‘पुरोहितको गाई’जस्ता वा ‘बिच्किएको जनावर’जस्तो आआफ्नो बाटोतर्फ कुद्छन् ?
६. किन सरकारले आफ्नो सशक्त रक्षा पंक्ति र अपनत्व गुमाउँदैछ ? किन शक्तिशाली भनिएको सरकार ‘लुते कुकुर’ बन्न वाध्य छ ?
यसमा कारण एउटै छ, सरकार मियोबिना दाइँ हाल्न खोज्दैछ । र, मियोबिना दाइँ हाल्न खोज्दा आफै झ्वाम्म खाल्डोमा जाकिँदैछ । हुन त सबैका आआफ्ना तर्कहरु होलान् । आआफ्ना विश्लेषणहरु होलान् तर मूलरुपमा ‘मियाबिना दाइँ हाल्ने’ प्रवृत्तिले नै सबै कुरालाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाइरहेको छ ।
जसले जे भने पनि ‘मियो’ भनेकै पार्टी र त्यसको नेतृत्व हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यसको स्थापना भएकै झण्डै ७० वर्ष पुग्यो । ७ दशक लामो अवधिमा कम्युनिष्ट पार्टीमा आएका सबै आरोह अवरोहहरुलाई छिचोल्ने र आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजहरुमार्फत मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तस्वीरसहित जनतामा जाने काम यसको नेतृत्वले गर्यो । केपी ओली सरकार एक्कासी आकाशबाट फुत्त खसेको होइन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पछाडि ७० वर्षे कम्युनिष्ट आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले पृष्ठभूमिको काम गरेको कुरालाई नकार्न कदापि मिल्दैन । राज्यसत्ता सञ्चालन बाहिर रहँदा जनतासँग गरेका बाचा, प्रतिवद्धताहरुलाई राज्यसञ्चालनको तहमा पुगेपछि लागु गराउनु कुनै पनि पार्टीको प्रमुख दायित्व हो ।
धेरै टाढा जानुभन्दा पनि सरलरुपमा बुझ्ने कुरा के हो भने, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनका लागि सबै पार्टीले ‘चुनावी घोषणापत्र’मार्फत सबै पार्टीहरुले जनतासमक्ष वाचा र प्रतिवद्धताहरु जाहेर गरेका छन् । मुलुकलाई कहाँदेखि कहाँ पुराउने भनेर वचन दिएका छन् । आफू राज्यसञ्चालन तहमा पुगेपछि तिनै वाचा र प्रतिवद्धताहरुलाई क्रमशः लागू गर्दै लैजानु पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी हो । यस अर्थमा अहिलेको सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकार नभएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार हो । मियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो भने गोरु केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार । विडम्बना, ओली सरकार मियोबिना नै दाइँ हाल्न खोज्दैछ । देशदुनियाँसामु छर्लङ्गै छ, मियोबिना दाइँ हाल्ने गोरु कहिले बारीतिर हाम्फाल्छ, कहिले छेउँतिर उभिएको मान्छेलाई हान्न सिङ सोझ्याउँछ । कहिले अर्को गोरुसँग भिड्नलाई नारिन्छ त कहिले मेला पसेर दाइँ मार्छ ।
विधि र प्रक्रिया भन्ने पनि केही चिज हुन्छ । मियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो सरकारले कुन क्षेत्रमा के गरोस् भन्ने चाहन्छ ? त्यसैअनुसार बैठक बस्ला, छलफल–बहस होला, पक्ष र विपक्ष होला र एउटा निर्णय होला । विधि र प्रक्रियाबाट सिङ्गो पार्टीले गरेको निर्णयमा पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले अपनत्व महसुस गर्छन् र त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्छन् । त्यसपछि जब विपक्षीहरुसँग आमनेसामने हुन्छन्, तिनै नेता÷कार्यकर्ता आफै तर्क गर्छन्, आफै बहसमा उत्रिन्छन्, आफै आफनो सरकारको बचाउमा ‘अरिङ्गाल’ बन्छन् । कसैले ‘अरिङ्गाल बनिदेऊ’ भनेर अनुनयविनय गरिरहनु नै पर्दैन ।
सरकार अहिले विवादै विवादको घेराभित्र छ । दम्भ र अहड्कारले प्रधानमन्त्री स्वयम् हान्ने गोरुजस्ता लाग्छन्, कतिखेर कहाँ हान्ने हुन् ? थाहै हुँदैन । आधा त उनी आफै बिगारिहाल्छन् । बचेको आधा पनि सरकारका निर्णय र जानकारीहरु सार्वजनिक गर्ने सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना र प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिगार्छन् । नागरिकता विधेयक त विवादमा पहिलेदेखि छँदैछ उनै सरकारका प्रवक्ताले चोरबाटो हुँदै उस्तै विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गर्छन् । सिङ्गो सञ्चारजगत आन्दोलित छ तर उनी आफ्नो हठ त्याग्न तयार छैनन् । मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, क्लिन फिडसम्बन्धी विधेयक हुँदै गुठीसम्बन्धी विधेयकसम्म धमाधम दर्ता हुँदैछन् । यता, यस्ता गम्भीर र महत्वपूर्ण कुराहरु वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत सञ्चारमाध्यमबाट विरोध भएपछि थाहा पाउँछन्, अरुका त के कुरा ? त्यही भएर नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र यहाँसम्म कि सांसदहरु नै कुहिराका कागजस्ता भएका छन्, यता जाने कि उता ?
यी सबै कुराहरु सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला पक्ष, आफ्नो पार्टी, संसदीय दल, सांसदहरु हुँदै आएका भए त्यहाँ छलफल हुँदो हो । भ्रममा परेकाहरु भ्रममुक्त हुन्थे होलान् । अस्पष्ट भएकाहरु स्पष्ट हुन्थे होलान् र अपनत्व महसुस भएपछि सबैले त्यसमा स्वामित्व ग्रहण गर्थे होलान् र माझिएर आएका विधेयकहरु सार्वजनिक हुँदा आउने सम्भावित प्रतिक्रिया वा आक्रमणहरुको प्रतिवाद हुन्थ्यो होला । र, समर्थनको आयतन फराकिलो बन्थ्यो होला । र, त्यसले सरकारलाई नै सफल बनाउने थियो होला । त्यही नहुँदा सिङ्गो पार्टी, नेता÷कार्यकर्ता, सांसद सबै किनारामा बसेर रमिते बन्नु र ‘थै थै’ भन्न विवश हुनुको विकल्प छैन ।
निशाना एउटा छैन । दुई हात, दुई खुट्टा सबै उठाएर एकैपटक अर्कोलाई हान्न खोज्दा आफूचाहिँ हड्डी भाँचिने गरी पछारिनुको विकल्प छैन । दाइँ हाल्नु नै छ भने पनि अड्याउने मियोबिनै दाइँ हाल्दा गुठी विधेयकमा जस्तै लुते कुकुरको शैलीमा भाग्नुको विकल्प छैन ।